တရုတ်စက်မှုသတင်းများစက်ရုံ - စျေးပေါတဲ့စက်မှုဝန်ကြီးသတင်းများပေးသွင်း, Export
အချိန် post: 04-20-2018
ဤသည် Koowheel လျှပ်စစ်မိမိကိုယ်ကိုဟန်ချက်ညီ Scooter E1 အလင်းဖြစ်၏ဒါပေမယ့်လုံ့လရှိသူ, မူပိုင်ခွင့်ဆန်းသစ်ဖက်ရှင်အေးမြဒီဇိုင်း, LED Display ကိုမျက်နှာပြင်လုံးဝဘက်ထရီနှင့်မြန်နှုန်း, 8inch ရော်ဘာ pneumatic တာယာနှင့်အတူစူပါစျေးမှာစုပ်ယူပြသပါ။ အပြင်ခေါက်နဲ့အလွယ်တကူသယ်ဆောင်။ သို့သော်ထိုသို့ identi ပေးနိုင်ပါသည် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
သင်ကတစ်ဦးနှစ်ဦးကဘီးကိုယ်ပိုင်ထပ်ဆင့်တင်ခြင်းလျှပ်စစ်စကူတာ Want အဘယ်ကြောင့်
အချိန် post: 03-21-2018
ဘက်ထရီစနစ်နှင့်အတွင်းပိုင်းဘုတ်အဖွဲ့ပစ်ခတ်တဲ့ပြဿနာရှိခဲ့အချို့ဖက်ရှင်တွေရှိပါတယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဘုတ်အဖွဲ့ကိုလည်းသင်တို့အလေးချိန်ပြောင်းသွားလေရာရာ၌သင်တို့ကိုအတိုင်းလိုက်နာမှတုံ့ပြန်မှုမျိုးအာရုံခံကိရိယာများနှင့်အတူတက်ရည်ရွယ်သည်။ တစ်ဦး Swagtron, နောက်ကွယ်မှနေအချိန် 1st ခြေလှမ်းခြေလျင် boarding အခါ။ သငျသညျဘအမှီမှဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 03-15-2018
မူလတန်းမော်ဒယ်များစျေးကွက်အပေါ်မရရှိနိုင်ပါသည်ထင်ရှားတဲ့အခါသူတို့ကတစ်ခုတည်းကိုသာသင်အထက်တန်းကျောင်း, ဒါမှမဟုတ်တခြားပေးရတဲ့ရန်, မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့အိမျကိုသှားဖို့လိုသောအခါအဘို့ကြီးသောဖြစ်ခြင်း, ဇာတိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့ထင်ခံခဲ့ရတယ်။ ဒါကအမြန်လျှပ်စစ်စကိတ်စီးတဲ့နောက်ဘက် disc ကိုဘရိတ်, ကြီးမား pneumati နှင့်တကွကြွလာ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 03-09-2018
ဘယျမေးခှနျးထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သနည်း ၏သင်တန်းက၎င်း၏အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့လျှပ်စစ်စကိတ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Koowheel အီး, RoHS, FCC သည် UN38.3 လက်မှတ်များရရှိထားပါပြီ။ ရုံကားတစ်စီးသို့မဟုတ်စက်ဘီးများကဲ့သို့ဤလျှပ်စစ်စကိတ်ဒါ့အပြင်ချောမွေ့ run ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူကြင်-ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။ ဖြစ်နိုင်ပါက အကယ်. ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 03-07-2018
အဆိုပါစကိတ်စီး၏ Construction နှငျ့ ပတျသကျ. , သင်က၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အချို့သောရှုထောငျ့စဉ်းစားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ မူလတန်း modular လျှပ်စစ် powertrain: သင်လျှပ်စစ်စကိတ်စီး၏စိတ်ကူးကိုကြိုက်ပေမယ့်သင့်ရဲ့ပစ္စုပ္ပန် setup ကိုချစ်ကြလျှင်, သငျသညျ eon ကြည့်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငါတို့ကဲ့သို့တစ်ဦးအမြန် PACE ကမ်ဘာပျေါတှငျ, ...ဆက်ဖတ်ရန် »
ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးများနှင့် Cool လျှပ်စစ်စကိတ်စီးဝယ်ယူ
အချိန် post: 03-02-2018
ဘက်ထရီအပြည့်အဝကညှစ်ရဲ့ဘယ်လောက်မှီခိုလောက် 2-3 နာရီအားသွင်းပေးပါတယ်။ သငျသညျကစိုးရိမ်ပူပန်ကျသွားသို့မဟုတ်အဝေးပျံခြင်းမရှိဘဲ, အဖြစ်အများကြီးသင်လိုချင်သောအဖြစ်သင်၏လက်ကိုပိတျထားသို့မဟုတ်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။ အဲဒီအစား, မြောက်မြားစွာ "အရည်အသွေးမြင့်" ဆဲလ်တွေမတစ်ခုတည်းအတွက် rated capacitive နီးစပ်ခဲ့တဲ့စွမ်းရည်ခဲ့ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 02-28-2018
သင်သည်မည်သည့်အချိန်ကခရီးသွားချင်ပါတယ်နွေဦးရာသီ, မကြာမီလာမည်သလဲ? သို့မဟုတ်ထွက်သွားနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကမ္ဘာစူးစမ်းလေ့လာလိုပါသလား? သင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်မိသားစုတစ်ခုအထင်ကြီးခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအားလပ်ရက်ပေးဖို့လိုသလား? အဖြေဟုတ်ပါတယ်, ထွက်သွားကြဖို့တစ်နေသာနေ့ကရှေးခယျြကျေးဇူးပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်လျှင်, သင်အဆုံးမှာမျှော်လင့်မထားတဲ့ရှုခင်းကိုဖမ်းပါလိမ့်မယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 02-23-2018
ဒါဟာလျှပ်စစ်စကိတ်စီးဧရိယာအတွင်းထွက်ရပ်တည်ရန်အချို့သောအလေးအနက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကြာရှိရာအမှတ်တက်ရောက်ခြင်းရဲ့; ရုပ်ပျိုဘရိတ်နှင့် In-ဘီးမော်တာနဲ့တူ options များ။ က flimsy ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ရဲ့ကမျှမျှတတ che ခံစားရအဖြစ်ကြိုးမဲ့ဝေးကွာသောထိန်းချုပ်မှုအားနည်းအဆင့်ကိုတစ်နည်းနည်းစဉ်းစားနိုင် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 02-06-2018
အများအားဖြင့်, သူတို့ကိုတင်ဆောင်လာသောအဆိုပါစကိတ်၏အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်ကြောင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျာမဏီအခြေစိုက်အများစုန်ထမ်းများတာရှည်ဥရောပအားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောလူအပေါင်းတို့နိုင်ငံများတွင်အမှန်တကယ်ဂျာမနီမှာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံရေးအစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်ထားတဲ့ "လျှပ်စစ်-Mobile" အကြောင်းကိုစပ်စုခဲ့သညျ။ ကျနော်တို့ကချုပ်-ထစ်ဝယ်အကူအညီနဲ့ပူဇော် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 01-25-2018
ငါတို့သည်လည်းထင်-အကြောင်းကိုတကွင်းဆက် drive ကိုအတွက်သက်ဆိုင်တင်းမာမှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားလုံးကတော့ hoverboard ပေမယ့်သင့်လျော်သောအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းရှိသည်သောတစ်ခုတည်းကိုသာဤအလျှပ်စစ် hoverboards သုံးစွဲဖို့လုံခြုံဖြစ်ကြသည် - ဤအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအားလုံးအမြင့်ဆုံး 10 အကောင်းဆုံး hoverboards ပါဝင်သည်။ သူတို့ကမည်သို့ပင်ဆိုစေက de ဖြစ်ခြင်းနေကြသည် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 01-19-2018
ထိန်းညှိဖို့အလွန်လွယ်ကူပါတယ်အဆင့်မြင့်နည်းပညာမိမိကိုယ်ကို balancing technique ကို, ဆောက်လုပ်ထား-in ကို gyroscope နှင့်ဆွဲငင်အားအာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူနှစ်ဆတည်ငြိမ်, နှင့်အတူ, ကိုယ့်ကောင်အလေးချိန်နှလုံးပြောင်းလဲပစ်, သင့် Scooter ပြင်သာပြောင်းသာခွင့် left, နောက်သို့ဆုတ်, ရှေ့ဆက်လွှဲပြောင်းနှင့်ပင်အတွက် 360 ဒီပလိုမာကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ် တစ်ဦးပွဲချင်းပြီး။ အကောင်းဆုံးကို FE တစ်ခုမှာ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 01-12-2018
အဆိုပါ mannequin ယင်းမော်တာ၏အရည်အသွေးနှုန်းအဖြစ်ဆုံးဖြတ်ထားခံရဖို့ရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်ငွေအများကြီးစျေးသွားမယ့်, သို့သော်ဆောက်လုပ်ရေးမှာကြည့်, ဤအန္တရာယ်ကောင်လေး၏ဆောက်လုပ်ရေး၏သက်သက်အရည်အသွေးကိုတာ, သင်ကပုန်းခိုနေတဲ့ Transformer ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေမအံ့သြ left ပါတယ်။ အလွယ်တကူ rech ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အဆိုပါအများစုမှာပျြောစရာကောငျး Hoverboard ထပ်ဆင့်တင်ခြင်း Scooter 2018
အချိန် post: 01-04-2018
အဖြစ်ကောင်းစွာသကဲ့သို့, လျှပ်စစ် Scooter အမျိုးမျိုးသောအရောင်လာဒါမကြာခဏတိုင်းပေါ်လာကြောင်းခြစ် cowl မှအကျိုးရှိသောအရာစတစ်ကာတွေနဲ့အလှဆင်ဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်တို့သည်နောက်အတွင်းမှာရည်မှန်းနေတဲ့နေရာတိုင်းမှာ destination သည်သင့်အားအရှိန်မြှင့်စေခြင်းငှါအမျိုးအစားရဲ့ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အဆိုပါလျှပ်စစ်စကိတ်စီး 2018 အတွက် Cool ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
အချိန် post: 12-22-2017
ခရစ္စမတ်မကြာမီလာသေး၏။ အသစ်ကတစ်နှစ်အတွက်သင့်ရဲ့ဆန္ဒကဘာလဲ? သင်သည်သင်၏သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်မိသားစုများအတွက်တစ်ဦးအေးမြနှင့်ဖက်ရှင်ဆုကြေးဇူးကိုရှာဖွေနေပါသလား? ဒီတစ်ခါလည်းသင်ထိပ်တန်းကစားစရာဆန္ဒ-စာရင်းအချို့ကိုပှနှင့် All-န်းကျင်ကြီးမြတ်ဆုလက်ဆောင်စိတ်ကူးများပါတယ်, ထို့နောက်ဆဲစံပြဆုလက်ဆောင်ထွက်မတှေ့နိုငျသနညျး သငျသညျ som ရှာနေပါလျှင် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 12-14-2017
မည်သည့်လျှပ်စစ်ကားများတွင် braking- ပြောင်းလဲနေသော, ပွတ်တိုက်မှု, ရုပ်ပျိုဘရိတ်အတော်ကြာမူလတန်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့ယာဉ်နှေး၏ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုပါ။ ပွတ်တိုက်အားဘရိတ် Braking ပွတ်တိုက်မှုသမားရိုးကျကားများပေါ်တွင်အသုံးပြုဖြစ်ကြောင်းဘရိတ်၏တူညီသောအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ အမှန်ကတော့, ပွတ်တိုက် agai ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 12-06-2017
များသောအားဖြင့်သင်တို့ကိုလက်ဖြင့်သင့်လျှပ်စစ်စကိတ်စီးတာရှည်အကွာအဝေးသယ်ဆောင်ရန်မလိုချင်ကြဘူး, တစ်ဘုတ်အဖွဲ့ကျောပိုးအိတ်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်သည်။ တစ်ဘုတ်အဖွဲ့ကျောပိုးအိတ်နှင့်အတူ, သငျသညျလညျးမိုးရာသီနံနက်ကာလအတွင်းအလုပ်လုပ်နေဆဲကညဦးယံ၌ sunnier င်သည့်အခါအိမ်ပြန်ကြောင့်စီးရန်သင့်ဘုတ်အဖွဲ့သယ်ဆောင်ရန်အခမဲ့ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ th ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 11-30-2017
ထိုအရပ်၌များစွာသောလိုင်စင်မဲ့ hoverboards စျေးကွက်အပေါ်ရရှိနိုင်ထွက်ရှိပါတယ်, သင်ကသင်သို့မဟုတ်သင့်ကလေးတွေကိုအဘို့အစီးလုံခြုံရာတစျခုရှိပါလိမ့်မယ်သေချာအောင်လုပ်ဖို့ကြိုက်တတ်တဲ့။ လူတစ်ဦးလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့သကဲ့သို့ဤသူတို့သ hoverboards ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်ပုံစံအတွက်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 11-03-2017
လူတွေရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်တက်ဆက်လက်အမျှ ပို. ပို. လူတွေကိုလိုက်စားပိုပြီးဖက်ရှင်နဲ့အဆင်ပြေအသက်တာကိုလိုလားကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့်သူတို့ကပိုအသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သောအရာတို့ကိုစူးစမ်းခြင်းငှါအလိုရှိ, youngers ။ ဒီတော့သူတို့ကရေတိုအကွာအဝေးခရီးသွားလာရေးကိရိယာများများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားဝယ်လိုအားရှိသည်။ တဖကျတှငျသူတို့ conv ခံစားနိုင် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 10-27-2017
ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးမိုဘိုင်းရှည်လျားသောအကွာအဝေးခရီးသွားရည်ရွယ်ကြသည်မဟုတ်သောကွောငျ့, သို့သော်မျှမျှတတတိုတောင်းသွားလာခြင်းရိုးရှင်းတဲ့နှင့်အပိုထိရောက်စေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြသည်ပါပဲ။ ကောင်းသောဖုန်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစတီရီယိုကစားယူနစ်၏ function ကိုခံစားယင်းဘလူးတုသ်များအတွက် Assist ။ ဤအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ, ဒီမောက်စ်တင် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အဘယ်ကြောင့်အဆိုပါ E-စကိတ်စီးဒီတော့ Sizzling ပြီးတော့ကိုသင်ခြင်းအားဖြင့်ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
အချိန် post: 10-19-2017
ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အမူထူးခြားတဲ့နေဟုသောအခါ IOS ကိုသကဲ့သို့ထင်ရှား၏တူညီသောအမျိုးအစားပြီးသားဈေးကွက်ထဲမှာရှိပါတယ်, လုံးဝဟုတ်မှန်ပါပဲ။ ဤရွေ့ကားလက်အခမဲ့လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်စကိတ်စီးနေတဲ့သန်းနေရာများမှယူနိုင်ပါတယ်, ကသင်သည်ထိုသူတို့ကိုခေါ်ဘယ်အရာကိုအရေးမထားဘူး။ Koowheel နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းလျှပ်စစ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အဆိုပါပြီးပြည့်စုံသောစျေးပေါတဲ့ဟာ Off လမ်းမကြီးလျှပ်စစ်ကိုယ်ပိုင်ထပ်ဆင့်တင်ခြင်းစကူတာ
အချိန် post: 10-05-2017
အဆိုပါအကွာအဝေးတစ်ခုလျှပ်စစ်စွမ်းအားမော်တော်ယာဉ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသော်လည်းမရှိမဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ တူညီအားလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကုန်သွယ်နှင့်အတူအနိမ့်မြန်နှုန်းမော်တော်ယာဉ်များအဘို့ကိုယ်ပိုင် balancing Scooter ။ Koowheel အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီး, ထို Hoverboard K7 ကို "Two-ဘီး, Self-ဟန်ချက်ညီပုဂ္ဂလိက car.R အဖြစ်မူပိုင်ခွင့်ရှိပါသည် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Koowheel 2nd မျိုးဆက်က e-စကိတ်စီးပထမဆုံးစီးနင်း
အချိန် post: 09-29-2017
မင်္ဂလာပါ ~ ကြောင့် Koowheel 2nd မျိုးဆက်လျှပ်စစ်စကိတ်စီး Kooboard ဖို့ငါ့အသက်ကိုအတွင်းပထမဆုံးလျှပ်စစ်စကိတ်စီးသည်, ငါမရှိသလောက်ထိုကဲ့သို့သောစျေးကြီးကစားစရာဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံဖြုန်း (အပြင်, ... "ကောင်းသောအကြောင်းရင်း" နှင့်အတူလမ်းကြောင်းစက်ဘီးဝယ်) ဒါကြောင့်ကျနော်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည် ပန်းခြံကိုသွား။ ထိုအခါငါကအရမ်း painf ခဲ့ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 09-22-2017
လျှပ်စစ်စကိတ်စီးနှင့်အတူနေသမျှကာလပတ်လုံးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လျှပ်စစ်ချိန်ခွင်လျှာဘုတ်အဖွဲ့ပိုင်ဆိုင်အဖြစ်, သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဦးစားပေးအညီအချို့သော DIY လုပ်ဖို့ကပိုများပါတယ်, ပူနှင့်ခေတ်သစ်လူငယ်များကကြိုဆိုကြသည်။ မကြာသေးမီကငါ Instagram ကိုအပေါ်အချို့သောအေးမြ DIY စကိတ်စီးထွက်ရှာပါ။ အရှိန်အဟုန်: တစ်ဦးကမြန်ဆန်, E-longboard ကူညီပေးပါမည် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အကောင်းဆုံး Hoverboard ကိုယ်ပိုင်ထပ်ဆင့်တင်ခြင်းစကူတာ 2017
အချိန် post: 09-19-2017
"Hoverboard" အဖြစ်တစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်ခွင်ညှိ Scooter တောင်းဆိုများအတွက်အကြောင်းပြချက်သင်အောက်ခြေအထက်လက်မ၏နံပါတ်လှုပ်ရှားနေကြသည်နှင့်တူစီးနင်းသော်လည်း, ကကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ မြေပြင်နှင့်အဆက်အသွယ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့သတိရပါ။ ဤသည်ကပိုနေတဲ့လမ်းပေးဖို့အဆင်သင့်ကြောင်းလျှပ်စစ် Scooter ဟန်ချက်ညီအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Two-ဘီးမိမိကိုယ်ကိုဖြစ်ပါတယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အကြီးမြတ်ဆုံးအားလပ်ရက်ခရီးစဉ် Tool ကို-Kooboard အေးမြဘဝ
အချိန် post: 09-05-2017
စျေးကွက်အပေါ်ရရှိနိုင်ယခုအချိန်တွင်အဆိုပါ "e-ဘုတ်အဖွဲ့" တစ်ခုတည်းကိုသာလူကြိုက်များသော, စိတ်ကူးယဉ်ပျဉ်ပြားများ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုတု။ ယခုငါတို့ပိုပိုပြီးလူတွေကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ဤခရီးသွား tool ကိုကျဆုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ မကြာသေးမီကတရုတ်ထိပ်ဆုံးငါး hoverboard အမှတ်တံဆိပ်ကုမ္ပဏီများထဲမှ 2nd မျိုးဆက်လျှပ်စစ် longboard ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်း ...ဆက်ဖတ်ရန် »
ပြန်လည်သုံးသပ်သုံးလုံခြုံဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးမိမိကိုယ်ကို balancing ဆိုင်ကယ်
အချိန် post: 08-23-2017
အဆိုပါ hoverboard သူတို့ပျော်ရွှင်န့်အသတ်ရရှိခဲ့နှင့် hoverboard စီးနင်းအပေါ်ခံစားနိုငျသောကွောငျ့, ပိုမိုနုပျိုသောလူကကြိုဆို, ဒါပေမယ့်ဘယ်လောက်လုံခြုံမိမိကိုယ်ကို balancing Scooter ရွေးချယ်ဖို့လဲ? အခုတော့သင်တို့အားငါလုံခြုံဆုံးသုံးခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးမိမိကိုယ်ကို balancing Scooter အကြံပြုကြကုန်အံ့။ ပထမဦးဆုံးတ KOOWHEEL အမှတ်တံဆိပ်ကိုယ်ပိုင် Balance ဖြစ်ပါတယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 08-07-2017
တိုင်းတနင်္လာနေ့သို့ရောက် လာ. , ခရီးဝေးအလုပ်ဆင်းလည်းလမ်းပေါ်တွင်ဘတ်စ်ကား / မြေအောက်ရထားပေါ်တွင်နာကျင်ဘဝစည်ကားကျွန်မတို့ရဲ့နှလုံးပင်ပန်းသည်ထင်, ပီပီမိတ်ကပ်ဖို့, နောက်ဆုံးတော့လူအစုအဝေးအတွက်ချွေးနှင့်အတူစိမ်ခဲ့သည်။ ခေတ်သစ်အသွားအလာ tools တွေကိုအမျိုးမျိုးသောရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းလူအပေါင်းတို့ကိုဖြည့်ဆည်းမပေးပေမယ့်: ကားကိုမောင်းလွန်းပိတ်ပင်တားဆီးမှု; မက်ထရိုဘတ်စ်ကား, ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Koowheel k8 ပုံမှန် 6.5inch hoverboard အကြားခြားနားချက်
အချိန် post: 07-26-2017
1. Price Koowheel 6.5inch smart balance wheel k8 is cheaper than regular 6.5inch hoverboard on the market. 2. Apearance Koowheel 6.5inch hoverboard k8 has the following features: private mode. Milan designer, which In line with European and American aesthetic habits. HANGHONG Motor (ensure t...ဆက်ဖတ်ရန် »
ကိုယ်ပိုင် balancing ဆိုင်ကယ်သုံးစွဲဖို့အန္တရာယ်ကင်းပါသလား?
အချိန် post: 07-07-2017
hoverboard, ကိုယ်ပိုင် balancing ဘုတ်အဖွဲ့, မကြာသေးမီနှစ်များတွင်အလွန်ရေပန်းစားသောအရာဖြစ်လာလျှပ်စစ်ချိန်ခွင်လျှာ Scooter အဖြစ်လူသိများလည်းကိုယ်ပိုင်ဟန်ချက်ညီဆိုင်ကယ်, ဒါမှမဟုတ်။ အထူးသဖြင့်အမေရိကန်နှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံ, သူတို့သည်စိန်ခေါ်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်အဝကိုကြိုက်နေ့စဉ်ဘဝကနေရယ်စရာအမှုအရာရှာဖွေတွေ့ရှိ။ ဤရွေ့ကား2ဘီးလျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်ပူဇော် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 07-03-2017
သငျသညျတစ်ခုတည်းသောစကိတ်အပေါ်စိတ်အားထက်သန်ပေမယ့်ရှိသမျှကိုသင်၏ခြေနှင့်အတူတွန်းငြီးငွေ့ဖြစ်? Koowheel တရုတ်ထံမှအသစ်တစ်ခုလျှပ်စစ်စကိတ်စီးရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းရွှေ့ဖို့လမ်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အောက်ပါဓာတ်ပုံကို htfubeck အားဖြင့်ကြာပါသည်။ ဒါကြောင့်မျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Koowheel လျှပ်စစ် longboard စကိတ်စီးသည့် sim နှင့်အတူဖန်တီးခဲ့ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 06-27-2017
လာသောအခါသွားလာရင်းခရီးသွားအခုဆိုရင်ပိုပိုပြီးလူတွေထို့နောက်လျှပ်စစ် Scooter ဖက်ရှင်အုပ်စုသည်ခရီးသွားအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တခုဖြစ်ပါတယ်, ဖက်ရှင်နှင့်နည်းပညာတောင်းဆိုမှုကိုရှိသည်။ သို့သော်အများဆုံးထုတ်ကုန်အသစ်တွေအဘို့, ကိုယ်ပိုင်ဟန်ချက်ညီ Scooter စျေးနှုန်းထက်ပိုစျေးကြီးသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကိုဝယ်သောအခါကြှနျုပျတို့သတိထားဖြစ်ရမည်။ ကျနော်တို့ purc ၏သုံးဒြပ်စင်တက်ချုပ်ဖော်ပြကြပါပြီ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 06-06-2017
ဖျော်ဖြေရေးအတှေ့အကွုံလျှပ်စစ်စကိတ်၏အသိဉာဏ် extension ကိုမွေးရာပါအပန်းဖြေ attribute တွေရှိသည်။ 1950 နှောင်းပိုင်းမှာတော့တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားကမ်းခြေအသိုင်းအဝိုင်းနေထိုင်သူများကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးစကိတ်စီးတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ မြေပေါ်တွင် surfing တစ်ခု extension ကိုအမျှလျှပ်စစ် Hoverboard ဘီယာအရက်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
သင်တို့အဘို့အသင့်လျော်ဘယ်ခရီးသွား tool ကိုရသနည်း
အချိန် post: 05-19-2017
ပစ္စုပ္ပန်မှာရေတိုအကွာအဝေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်, အငယ်ချိန်ခွင်လျှာ Scooter, လျှပ်စစ် Scooter, လျှပ်စစ် Scooter နှင့်လျှပ်စစ်စကိတ်စီးသည်ဤလေးမျိုးအမျိုးအစားများကိုပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုချေ။ သူတို့ရဲ့ဘုံ features တွေ, လျှပ်စစ်အပြင်, အရေးအပါဆုံး w အဖြစ်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီးပို features အသစ်ဖြစ်ပါတယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 05-11-2017
လျှပ်စစ်စကိတ်စီးပျော်စရာအပြည့်အဝနှင့်လူငယ်များစွာလူမျိုး၏ဝါသနာဖြစ်လာသည်။ မကြာသေးမီက, အထူးသဖြင့်အများအပြားမိန်းကလေးငယ်များဤအသင်းအတွက် join ဖို့စတင်ပါ။ သို့သော်ထိုမိန်းကလေးများသုံးစကိတ်စီးအစဉ်အလာများထဲမှသည်မဟုတ်, KOOWHEEL D3M dual-မော်တာလျှပ်စစ်စကိတ်စီး။ ထိုသို့သောစကိတ်စီးလှပသော appearan ပိုင်ဆိုင် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
ဘယ်လိုလျှပ်စစ် Scooter စီးထားတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကော?
အချိန် post: 04-17-2017
အခုဆိုရင်လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်အားလပ်နှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးများအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ လျှပ်စစ်ချိန်ခွင်လျှာ Scooter စီးအဆိုပါလူငယ်များ, လက်ကျန်ငွေနှင့်တုံ့ပြန်မှုစွမ်းရည်ကိုကငျြ့သုံးနိုငျသညျ, နှင့် cerebellum ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမြှင့်တင်ရန်နိုငျသညျ, ထို cardiopulmonary စောင်ရေတိုးမွှငျ့။ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
လျှပ်စစ်ချိန်ခွင်လျှာ Scooter - သင့်ဖက်ရှင်ဘဝပြရန်
အချိန် post: 04-05-2017
traffic ယိုထို့ကြောင့် "ပိတ်ဆို့မှုကို" မွို့တှငျနထေိုငျသောသူတို့သည်လူတို့အဘို့အသုံးအများဆုံးနာမဝိသေသနဖြစ်လာခဲ့ပြီး, မြို့မှာရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်တဲ့ယာဉ်ရပ်နားအာကာသရှာဖွေနေ၎င်း၏အလွန်ခက်ခဲ။ ဒါကြောင့်ဒီမြို့တော်အတွက်လျှပ်စစ် hoverboard, အထူးသဖြင့်နွေရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူခရီးသွားလုပ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »